Fanajana - mora izany fahombiazana!
Veloma amin'i Shy
Aza miteny intsony, miteny bebe kokoa
Sahia ihany amin'ny farany!
Amidio toy ny majia
Mamandrika fivoriana fihaonana
Efa ao aminao ny fahombiazanao ...
Ny fanajana dia hery majika miasa fahagagana, pilina fahagagana hahombiazana, ary tsy takatra tokoa fa tsy nanana lesona tany an-tsekoly daholo isika rehetra tamin'ity taranja lehibe ity hatramin'ny kilasy voalohany.
Izany no antony nanoratako ity boky ity ho an'ny olona rehetra izay nitovy tamiko, izay nanandrana ela loatra nefa tsy nandroso araka izay tadiaviny sy mendrika azy.
Ao amin'ny "Fanajana - mora tokoa ny fahombiazana" asehoko anao ny maody mazika, asehoko anao fa mora kokoa sy mora kokoa hatrany hatrany ny mahazo ny tampony, ny fahombiazanao manodidina ary ho tombontsoan'ny rehetra.
Mangataha boky maimaim-poana izao
Ny fomba fiasan'ny fanajana, ny fomba ahafahantsika mitondra fanajana bebe kokoa amin'ny fifandraisana rehetra ary ny fomba fiasan'ny fankasitrahana tsara sy haingana - izany no nofaritako tao amin'ilay boky.
Raha toa ahy ianao, tsy manam-paharetana sy manolo-tena ary mitady fahombiazana, dia mety ho anao irery ny coaching ... Miaraka amin'ny mpanoro hevitra eo anilantsika, tsy vitan'ny hoe haingana sy mora kokoa io, fa mitaky ezaka kely kokoa ihany koa & hadisoana.
Jereo ho anao amin'ny resaka tetika 45 minitra maimaimpoana miaraka amiko. Ny fotoana dia vola, hoy izy ireo. Fa mihoatra noho izany, misy ny vidiny ilaina, ny vidin'ny fanaovana tsirambina, ny fanemorana, ny tara loatra, ny fahaverezan'ny fahaverezana. Ny vidiny izay tsy hitanao sy takany ary izay amin'ny farany dia lafo be aminay.
Tadiavo avy hatrany ny fanendrena maimaimpoana manaraka ahy - manantena azy aho!
Maimaim-poana 45-min. Mamandrika fivoriana fihaonana
Fanajana - mora izany fahombiazana
Mpandraharaha ve ianao, olona miasa tena na mpanao asa-tanana?
Miasa be ve ianao ary manonofy hanana rivotra bebe kokoa?
Te hanana vidiny tsara kokoa sy sarany ambonimbony kokoa ho an'ireo serivisy ambony eto an-tsena ve ianao?
Sa te hanana zavatra mora kokoa, tsara kokoa sy mahafinaritra kokoa fotsiny ianao?
Avy eo ianao dia tokony hamela ny iray amin'ireo hery matanjaka indrindra misy miasa ho anao - fa tsy tokony hametraka angovo tsy manam-petra amin'ny asanao.
Miresaka momba ny fanajana aho. Ny tena fanajana, tena fanajana ny tenanao sy ny manodidina anao. Ho gaga ianao amin'ny zava-mitranga. Mora kokoa, haingana ary tsara kokoa ...
Vitsy ihany no nanaiky izany.
Ny fanajana no fanalahidy - ary tokony hampiasainao izao. Ho tombotsoan'ny mpanjifanao sy ny fianakavianao ary ny tenanao.
Mpanjifa bebe kokoa
Ny fanajana angamba no hery ambany indrindra amin'ny fiaraha-monina misy antsika. Tsy dia nahalala momba an'izany izahay tany am-pianarana, ary na izany aza tsy azontsika ny fomba fampiasana ny fanajana amin'ny fiainana andavanandro ho tombontsoan'ny tsirairay.
Ny tenako ihany no nahamarika izany taorian'ny taona maro tao amin'ilay asa, ary ny vadiko dia mpitsabo mpanampy sy mpitaiza ho ahy tsy mihoatra ny indray mandeha.
Ary ny zavatra mahatalanjona dia: ny fahalalana fotsiny dia lavitra ny ampy.
Na dia taorian'ny ninoako fa nahatakatra ilay hevitra aza aho dia mbola naharitra am-polony taona maro ny fampiharana sy ny fampiharana mba hahitana ireo pitsopitsony maro momba ny fankasitrahana sy ny fanajana ary ny fahazoana ny rafitra ao ambadik'izany.
Mazava ho azy fa afaka manao toy izany koa ny tsirairay, mahita azy samirery - ary mampiasa vola antsasaky ny fiainana matihanina amin'izany ...
Fa raha tsy manam-paharetana ianao, te hahafanta-javatra ary noana, toa ahy, dia faly aho mampiseho aminao ny fanafohezana. Mora be ...
toy ny fanaon'ny ankizy kely: ataovy aloha - vao mahatakatra.
Ary izay AZONAO atao, tsikelikely, hasehoko anao ary faly aho miaraka aminao. Raha tianao. Gaga azo antoka, fahombiazana tampoka tsy ankanavaka.
Misorata anarana hiresaha tetika maimaim-poana amiko ary andao ho hitantsika izay mitranga aminao. Manantena ny hahafantatra anao manokana aho.
JT Foxx Chicago - Ny fanajana no fototry ny rehetra
Mpanazatra orinasa 1, mpandraharaha serial, trano sy mpampiasa vola tsy miankina, JTFoxx amin'ny herin'ny fanajana sy ny zavatra niainany niaraka tamin'i Juergen tamina hetsika fandraharahana naharitra 5 andro tany London.
Patrick, mpandraharaha tanora, mpanazatra 8: 1 mandritra ny 1 herinandro.
Nahita ny fetrako manokana aho, nanamboatra ny fifantohana, nampitombo ny fahatokisako tena, nahita fomba fijery vaovao ary nampandroso ny orinasa. Mendrika izany, natolotra.
Irem, mpianatra lalàna sy mpandraharaha amin'ny haino aman-jery sosialy momba ny famolavolana zoom miaraka amin'i Juergen, ao anatin'ny vanim-potoana Corona.
Feo Iraisam-pirenena momba ny fanajana
Resadresaka momba ny "Fanajana" manerantany amin'ny taona 2019 sy 2020.
Fred Fishback, tale jeneralin'ny Javelin Industries - Fanajana
Fanajana - zavatra tena manan-danja sy ilaina ankehitriny.
Ny foto-kevitry ny fanajana dia tena fototra, io no tsy maintsy fehezinao aloha.
Mila ny fahatsoran'ity fotokevitra ity izahay.
Heveriko fa manana zavatra tena lehibe ianao ary faly be aho amin'ny zavatra ataonao Juergen.
Ny fanajana no fototry ny fifandraisantsika,
ny fanajana no fototry ny fiheveran-tena,
ny fanajana no fototry ny fitomboana fanampiny.
Tena faly aho ny zavatra ataonao, hevitra matanjaka be io.
Fihaonambe ao amin'ny Fikambanan'ny Lalàna malaza any Londres
Resadresaka fohy natao momba ny “Fanajana” tao amin'ny Business Conference 2020 tao amin'ny Law Society malaza any Londres.
Hanaja ny tafatafa Hilton London Metropole
Resadresaka “Fanajana” nohavaozina 2020 tao amin'ny London London Metropole Lobby
Manana trosa betsaka aminy aho, apetrany amin'ny tetik'asa rehetra ny zava-drehetra, misokatra ho an'izao tontolo izao izy ary tsy matahotra fanovana, tsy matahotra fanamby ... Tao anatin'ny enim-bolana nahalalako azy dia efa nanampy ahy be raha ny eritreritro manokana dia mivoaka miaraka amin'ny plus ianao.
Faritra mpikambana miaraka amin'i DigiMember